Adim-pampielezan-kevitra : Kaonty Twitter Rosiana Manakiana ny ” Fandrosoana” ataon’i Etazonia any Iràka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2014 7:18 GMT
Obama sy Putin eo anilan'ny sainan'ny ISIS sy ny tombokasen'ny Departemanta Amerikana. Sary namboarin'ny mpanoratra.
Olona iray manoratra amin'ny teny rosiana no namoaka ny fiantsiana farany tamin'ny aterineto ny governemantan'i Etazonia, raha nanokatra kaonty twitter mitondra ny anarana @IraqProgress. Kaonty iray maneso avy amin'ny hala-tahaka ny kaonty twitter-n'ny Departemantam-Panjakana Ofisialy iray , @UkrProgress,izay loharanom-baovao amin'ny teny Rosiana ampiasain'i Washington hanoherana ny fampielezan-kevitra Rosiana momba ny zava-misy any Okraina.
Na iza na izao ao ambadik'ireo tweets ireo dia tiany aseho fa mampihatra ny mizana tsidiran'ila i Etazonia amin'ny fanohanana fiokoam-bahoaka.
Niforona tamin'ny 24 jona ny @IraqProgress ary tao anatin'ny iray andro monja dia nahasintona mpanjohy mihoatra ny 900 tamin'ny twity 11 monja. Maka tahaka ampahibemaso ny fanehoana an-tsary hita ao amin'ny @UkrProgress, kaonty iray fampielezan'ny departemantam-panjakana teny tsara lahatra sy sary mampivarahontsana ho fanoherana ny fampielezan-kevitra ataon'ny filazam-baovao rosiana.
Atoraky ny @IraqProgress amin'ny fomba mampihomehy hitovy amin'ny fiokoana amin'ny governemanta any Iràka amin'izao fotoana izao ataon'ny fanjakana silamo any Iraka sy any Siria (ISIS), izay miady amin'ny fametrahan ‘i Etazonia Governemanta any Bagdad ny fanohanan'i Etazonia ny revolisiona EuroMaidan any Okraina. Ahitana ny sainan'ny ISIS sy ny diezy #UnitedForISIS ny sarintavan'i “Fivoarana hoan'i Iràka” ao amin'ny Twitter. Avadiky ny twitin'ny kaonty ho hetsika an-kerimpo ho amin'ny demokrasia ny herisetra ataon'ny miaramilan'ny ISIS, manondro ny jihadista ho mpiady ho amin'ny fahafahana tsy mitovy amin'ireo nanala ny mpitondra fanjakana Okrainiana taloha Viktor Yanukovych.
Ny #marina momba ny ” famonoana” sy ny ” fitifirana andian'olona.” [vakin'ny soratra, “Nolazainy anao fa famonoana miaramila nataon'ireo ‘mpiadin'ny ISIS’ io? fanadiovana ireo mpiara-miasa amin'ny fitondrana manampatra fahefana io, tarihin'ny mpanohana ny demokrasia avy amin'ny ISIS!” arahan'ny fehezan-teny hoe, ” Aza mino izay rehetra hitan'ny masonareo.”] pic.twitter.com/11qSVtpdEm
#Kasparov amin'ny hetsika ataon'i Putin any Iraka. #Fahamarinana [vakin'ny soratra,” vokatry ny fanapahan-kevitr’ i Putin samirery mivantana mba hamotehana ny fototry ny filaminana ankapobe izao toe-draharaha misy ankehitriny izao.’-Garry Kasparov, Mpampianatra Lehibe.’] pic.twitter.com/7pD9QQ8Etc
Mety tsy haharitra ela ao amin'ny twitter ny @IraqProgress na dia nalaza hatry ny ela aza. Mandika ny politika anaty mifehy ny twitter io kaonty io amin'ny alalan'ny fampiasany ny tombokase ofisialin'ny Departemantam-panjakan'i Etazonia eo amin'ny twitiny maro samihafa sy ny famaritany ny tenany ho ” vaovaon'ny toe-draharaha any Iraka asehon'ny departemantam-panjakana. Raha ny tena izy dia misy ny toro-lalana hentitra momba ny ” kaonty fakana tahaka hanesoana, filazan-kevitra ary an'ny mpankafy,” izay mitaky fanazavazavana avy amin'ny mpampiasa ny fikambanana misy azy eo amin'ny filazana ny mombamomba azy. Tsy manao izany anefa @IraqProgress.
Na izany aza, hatramin'ny nitodihan'ny Twitter tany amin'io kaonty vaovao io, dia azo antoka fa maro ao amin'ny RuNet no mankafy ity fizaran-tantara tsy mety tapitra amin'ny adim-pampielezan-kevitra eo amin'ny Rosia sy Etazonia ity.